Wasiirka ganacsiga oo tababar u furay wakiilada ganacsiga Somalia+Sawirro | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Wasiirka ganacsiga oo tababar u furay wakiilada ganacsiga Somalia+Sawirro
Wasiirka ganacsiga oo tababar u furay wakiilada ganacsiga Somalia+Sawirro
Ku simaha Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Washadaha Soomaaliya Inj. Cabdullaahi Cali Xasan ayaa maanta furay tababar aqoon kororsi ah oo kor looggu qaadayey awoodda shaqo ee Wakiilada Ganacsiga Soomaaliya u qaabilsan dalalka caalamka. Waxaana tobabarkan oo ka qabsoomay habka Muuqaal-Arag ah ee Internet-ka ka soo qeyb-galay mas’uuliyiinta Wasaaradda, Wakiilada Ganacsiga iyo Bangiga Adduunka.
Tababarkan oo ay iska kaashadeen Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya iyo hay’adda IFC oo ka tirsan Bangiga Adduunka, ayaa ujeedkiisu ahaa sidii Wakiilada Ganacsiga kor looggu qaadi lahaa heerkooda aqooneed ee la xiriirta horumarinta dhinacyada dhaqaalaha, diblomaasiyadda, shuruucda ganacsiga iyo maal-gashiga. waxaana si gaara looggu tobabaray waxyaabaha muhiimka u ah sidii Wakiiladdaasi ay dalka ugu soo jiidi lahaayeen xiriiro ganacsi iyo sidoo kale inay maal-gashadeyaasha caalamiga ah iyo qurba-joogta Soomaaliyeed ay ugu soo dhiiri-gelin lahaayeen inay dalka Maal-gashadaan.
Ku-simaha Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Inj. Cabdullaahi Cali Xasan oo halkaas hadalo ka jeediyey, ayaa sheegay in tobabarkani uu ahmiyad weyn u lee yahay wadanka, waxaana uu Wakiilada ganacsiga uu kula dardaarmay inay mas’uuliyad iska saaraan sidii ay wadanka ugu soo jiidi lahaayeen xiriiro ganacsi iyo weli sidoo kale maal-gashiyo caalami ah maadaama ay yihiin Wakiilada rasmiga ah ee wadanka u qaabilsan dhinacyada horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga.
Tababarkan, ayaa wax weyn ka beddeli doona xiriirka Ganacsi ee Soomaaliya ay la leedahay dalalka caalamka sidoo kale kor uqaadidda fahamka ay Wakiilada Ganacsigu ka haystaan dhinacyada Maal-gashiga iyo Ganacsiga iyada oo sidoo kale uu tobabarkani kor-uqaadaayo sidii ay Soomaaliya ay wax-soo-saarkeeda ugu dhoofin lahayd wadamada caalamka.
Maqaal horePuntland oo maanta diiwaan-gelisay kiisas cusub oo Coronavirus ah
Maqaal XigaSawirro: Wasiirka gaashaandhigga oo tababar u soo xiray saraakiil cusb